musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Andorra Kupwanya Nhau » Inodiwa: Inishuwarenzi yehutano yevashanyi kuEuropean Union
Andorra Kupwanya Nhau • Austria Kuputsa Nhau • Belgium Breaking News • Bulgaria Kuputsa Nhau • Croatia Kuputsa Nhau • Czechia Breaking News • Denmark Kuputsa Nhau • Finland Kuputsa Nhau • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • Italy Kuputsa Nhau • Liechtenstein Kuputsa Nhau • Luxembourg Breaking Nhau • Malta Kuputsa Nhau • Monaco Kupwanya Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • Poland Breaking Nhau • Slovenia Kuvhuna Nhau • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi
Iwe uri mugari wenyika iyo iyo EU iri kuda kuve nevisa yekupinda? Mavisa anodikanwa kuvagari vakadaro zvakare kana vachigara munyika dzakaita seUnited States kana Canada. Iwe uri mugari we chero nyika iri kunze kweEurope urikuronga kuti ugare kwenguva yakareba muEurope kune basa rekuita kana zororo?
Kana mhinduro yako iri hongu unogona kurangarira Obama Kuchengeta kana hutano kune vese. MuEurope, kwete chete vagari vanoda inishuwarenzi yehutano, asiwo vashanyi. Kunze kwekushanya kwenguva pfupi kubva kuvagari vanogona kupinda muEU vasina vhiza. Kuti vamiriri vabudise vhiza inoshanda kumatunhu eSchengen, humbowo hwekufukidzwa kwehutano hwakakosha.
Kuti nyika yeEU consulates ibudise vhiza inoshanda kumatunhu eSchengen, humbowo hwekuvhara hutano hunodiwa.
Izvo iwe zvaungade kuziva kana uchitenga inishuwarenzi.
Iyo inishuwarenzi inofanira kuve inoshanda mune dzese EU uye Schengen nyika
Iyo inishuwarenzi inofanirwa kuvhara iyo nguva yekugara kwako kwese, kunyangwe uchingo famba
Mari shoma yeinishuwarenzi yako inofanira kunge iri EIRP 30,000.00
Nyika yega yeEU ine zvakare yakatarwa mitemo yenyika iwe yaunofanirwa kutarisa.
Semuenzaniso, kuGerman, yako inishuwarenzi inofanirwa kuvhara 100% yezvose zvinodhura zvekuchipatara, zvisinei kana iwe uine nzira yekurapa yekurapa kana kubvumidzwa. Izvi zvinofanirwa kusanganisira kana iwe uchifanira kuonekwa nehunyanzvi. Iko kunze kwehomwe mutengo kune chero inishuwarenzi haigone kudarika 5,000 Euro.
Kana iwe usingade vhiza yekutanga kupinda munyika yako yauri kuenda, unofanirwa kupa humbowo hweinishuwarenzi mazuva ekupedzisira makumi matatu nemasere kana wasvika. Zviremera zvakanyatsodzidziswa kutarisa izvi. Madiplomate haaregererwe.
Zviri nyore uye zvinokurumidza kutenga inishuwarenzi yakadaro.
Nyanzvi dzinokurudzira kutaura neinishuwarenzi senge BDAE Gruppe, sezvo iri boka rine makore echiitiko mundima iyi.
Zvinonzwisisika uye zvinogona kudikanwa kune vasiri vagari veEU zvakare kuona nhengo dzemhuri futi. Mazuva ano kutarisirwa kwehutano kunogona kudhura zvakanyanya.
Tsvaga Kushanya shanya, semuenzaniso, iri kupa kuzara kwakazara kweEUR 1.10 chete pazuva.
More ruzivo pamusoro hutano Inishuwarenzi yevatorwa kuGerman .